MUUQAAL :- Booliska Germany oo dhaawacay wiil Soomaali ah oo weerar ka geystay dalkaasi. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News MUUQAAL :- Booliska Germany oo dhaawacay wiil Soomaali ah oo weerar ka...
Sida uu Qurbaha.net u xaqiijiyay Wariya Sharmaarke Faarax Guuleed oo ka mid ah wariyayaasha ku nool dalkaas ciidamada Booliska wadanka Germany ayaa dhaawac u geystay wiil Soomaali ah oo la sheegay in uu weerar ka geystay Magaalada Frankfort.
Muuqaal ayaa laga duubay goorta booliska dalkaasi ay dhaawaca u geysanayeen wiilka Soomaaliga.
Ninkaani oo lagu magacaabo Liibaan Cali ayaa la sheegay in uu ka mid ahaa qolooyinka dhanka amniga ka shaqeeya ee magaaladaasi lamana iga sababta ilaa iyo hada la dambeysa in uu falkaani ku kacay.
Wariya Sharmaarke ayaa qurbaha u sheegay in Liibaan dhawaan uu kasoo laabtay Soomaaliya kadibna lagu arkay dhaqamo aan horay loo aqoon.
hoos ka daawo muuqaalka kana dhageyso Wareysi Mohamed Abdi Nahar uu siiyay Wariye Sharmaake.
Previous articleCiyaaraha Tokyo : Waa tumaa gabadhii u awood sheegatay Ramla Cali?
Next articleMarian Hussein oo ah gabar Soomaali ah oo ku biirtay Barlamanka Norwey